नेपाल-खनाललाई स्थायी कमिटी सदस्यहरूकाे पत्र : वार्ताको औचित्य सकियो, नयाँ पार्टी बनाऊँ « News24 : Premium News Channel
नेपाल-खनाललाई स्थायी कमिटी सदस्यहरूकाे पत्र : वार्ताको औचित्य सकियो, नयाँ पार्टी बनाऊँ
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अब अलग पार्टी बनाएर अघि बढ्नु पर्ने धारणा अघि सारेका छन् । नेकपा एमालेबाट निस्कासित वरिष्ट नेता नेपाल- खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा, प्रकाश ज्वाला, डा. विजय पौडेल र राजेन्द्र राईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै अलग पार्टी बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका हुन् ।
‘वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, यसलाई तत्काल बन्द गरौं’, पत्रमा उल्लेख छ । शीर्ष नेताहरुलाई निष्काशनको निर्णय ओलीले गरेकाले कार्यदलको औचित्य सकिएको पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुले कार्यदलका सदस्यहरुलाई समेत चेतावनी दिएका छन् । कार्यदलमा रहने नेताहरुले सबै केन्द्रीय सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । एमालेभित्रको अन्तरसंघर्ष फुटतिर अग्रसर भइरहेका बेला दोस्रो तहका नेता संवादमा सक्रिय छन् ।
नेपाल–खनाल समूहभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जेठ २ मा फर्काएर एकता बचाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । बिहीबार भर्चुअल छलफलमा पनि घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पार्टी बचाउन आफूहरुले प्रयास गरेको बताएका छन् ।
पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास जारी रहेका बेला चार नेताले भनेका छन्, ‘हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौं कि वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, यसलाई तत्काल बन्द गरौं ।
नयाँ आधारमा नयाँ राजनीतिक बाटो तय गरौं र देशलाई प्रतिगमन, राष्टघात, फिजीकरण गर्ने गुरुयोजनालाई परास्त गर्न लागौं । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वर्तमानमा हाबी भएको विसर्जनवाद र दक्षिणपन्थको विरुद्धमा प्रगतिशील, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गोलदन्द गरौं र देशको संघीय, लोकतान्त्रिक गणथतन्त्रमाथि आइपरेको चुनौती सामना गर्न देशभरीका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन लागौं ।’
उनीहरूले १० बुँदे धारणा अघि सार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाइसकेको बताएका छन् । ‘के पार्टीभित्र आन्तरिक एकता गर्ने ठाउँ केपी पक्षले बाँकी राखेको छ ? के ०७८ फागुन २८ गतेदेखि उनीहरु स्वयमले पार्टी विभाजित गरेका होइनन् ? पार्टी कब्जा गर्ने नियतले गरेका सबै कृत्यहरूले कार्यकर्ताहरूलाई एकताको भाव भर्ने गरी, उत्साही बनाउने गरी तथा दुबै पक्षको विजय भएको अनुभूति हुने गरी सहमति गरिनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने आधार तयार गरेको छ ? के हामीले गर्विलो स्वरले पार्टीलाई विधि विधान, अनुशासन र यसको मूल्य प्रणाली अनुसार हिन्न वाध्य बनाउन छौं भनी गरेको उद्घोषलाई कुनै सहमतीले सफल बनाउने छ ? यी प्रश्नहरूको सही उत्तर खोज्ने क्रममा नै हाम्रा विचारको रक्षा हामी आफैंले गरेका हुन्छौँ कि हुँदैनौ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दछ । यो वार्ता सन्दर्भ असफल हुने प्रष्ट देखिएको छ’, उनीहरूले किटान गरेका छन् ।